PRINCE2 Aqoonsiga Shahaadada ee Gurgaon & Delhi NCR, India - Iskuulka ITS Tech
PRINCE2 Foundation Koorsada Tababarka & Shahaadooyinka
PRINCE2® (Mashruucyada Meelaha la Xakameynayo), waa habka maaraynta mashruuca oo ballaadhan oo lagu isticmaalo dhammaan waxyaalaha lagama maarmaanka u ah mashruuc guul leh. PRINCE2® waa hab dabacsan oo loola jeedo dhammaan noocyada mashaariicda ah. PRINCE2® waa heer juqraafi ah oo loo adeegsado oo loo isticmaalo dawlada Boqortooyada Midowday oo si guud loo aqoonsado looguna isticmaalo qaybaha gaarka loo leeyahay, UK iyo caalamkaba. Waxay ku dhisan tahay habka ugu wanaagsan ee la xaqiijiyay ee maareynta mashruuca.
Fahmee baaxadda, fikradda iyo ujeedada habka PRINCE2
Fahmaan oo fuliyaan hababka PRINCE2, mabaadiida iyo mawduucyada
Fahmaan qiimaha iyo mabaadii'da habka qaabaysan ee maareynta mashruuca
Ku maaree Maamulaha Mashruuca aqoonta si aad u dalbato PRINCE2 mashaariicda
Ururada ama Shakhsiyaadka oo arkaya baahida loo qabo habka la kontroolo ee maareynta mashaariicda. Mashruucyada mashruuca, la-taliyayaasha iyo shaqaalaha taageerada waxay u baahan yihiin faham dhammaystiran oo ku saabsan dhammaan dhinacyada mashruuca nolol-maalmeedka iyo dukumiintiyada maareynta muhiimka ah ee la abuurayo marxalad kasta oo mashruuc ah.
Mawduuca Muujinta Duration: 6 Maalmaha
Taariikhda & Ujeeddooyinka
Ururka Project 2
Doorarka iyo masuuliyadaha
Ujeeddo iyo muhiim
Qaybaha iyo noocyada qorshaha
Qorsheynta sheyga ku salaysan
4 Maareynta Mashruuca
Oggolaanshaha qorshaha shaqada
Sameynta mashaariicda iyo dulqaadka heerka
Baaritaannada iyo falanqaynta warbixinnada
Xaaladaha xaaladaha ka reeban
Maareynta Khatarta 5
Noocyada ganacsiga iyo khatarta mashruuca
Falanqaynta khatarta iyo maamulka
Qoraalka khatarta ah
Xakamaynta tayada iyo dib u eegista tayada
7 Xakameynta Beddelka iyo Maareynta Qalabka
Beddel talaabooyinka xukunka
Falanqaynta saameynta Maaraynta qaabka
Hirgelinta iyo bilaabida mashruuc
75 su'aalaha warqad kasta
Su'aalaha 5 si ay u noqdaan tijaabo oo aan lagu tirin dhibcaha
Muddada daqiiqo ah 60